Agụmakwụkwọ Njikọ batrị nke Anyanwụ - Ewere na nzuzo wụnye Solar Batrị- Kimroy Bailey Group
Igodo Njikọ batrị nke Anyanwụ ga-akụziri gị otu ị ga-esi nwee nkwenye ụlọ batrị maka sistemụ ike anyanwụ gị.
SKU: KB-OC-006 Categories: Renewable Energy, Usoro nkuzi ume, Mbara Igwe nke Anyanwụ
Ejiri Igodo Njikọ batrị nke anyanwụ iji hụ na ị nwere ọzụzụ achọrọ iji
Ihe Nmekorita nke Batrị: Otu esi Eme na Ise Vs Gburugburu
Nchekwa batrị na itinye usoro kachasị arụmọrụ
Mmezi batrị iji hụ na ị nwetara ndụ kachasị site na nchekwa anyanwụ gị
Igodo nke Njikọ batrị nke Anyanwu na-akuzi otu esi ejikọ batrị na usoro na Ndekota. Ọzụzụ ahụ kpuchie intricacies nke nchekwa batrị, nnwale maka batrị batrị na ndozi batrị.
Usoro ihe omumu a na - akwado ihe omumu enyere na
Anyanwụ Sistem Sizing Agụmakwụkwọ - Muta otu esi eji otu mbara igwe okpukpu k’igwe iji wee nwee ike ịdabere na ụlọ gị.
Larkwụ na larkwụ Solar - Muta otu esi eji obi ike wunye Igwe ike Solar Energy
1 nyochaa maka Igodo nke Njikọ Batrị
Igodo Njikọ batrị nke Anyanwụ ga-akụziri gị otu ị ga-esi nwee nkwenye ụlọ batrị maka sistemụ ike anyanwụ gị. Akụkụ kachasị mma gbasara mmemme a ọ na - egosi gị ihe dị iche na njikọta usoro yana njikọta ya na ihe ọ bụla pụtara mgbe ọ bụla n'iche banyere ike ị nwere na akụ batrị gị.
ỌR IN AKA NA-EKWU
Ọ nwere ọnọdụ nke ikuku na-enweghị atụ. Ọ bụrụ na ị ga-agbadata ime mmụọ, ọ ga-eme ka onye na-emega ahụ na-eme nke ọma.